Taliska Maraykanka ee Afrika oo war ka soo saaray kulankii Axmed Madoobe iyo Deni | XAL DOON
Home NEWS Taliska Maraykanka ee Afrika oo war ka soo saaray kulankii Axmed Madoobe...
Taliska Maraykanka ee Afrika oo war ka soo saaray kulankii Axmed Madoobe iyo Deni
Taliska ciidanka Maraykanka ee Afrika (AFRICMO) ayaa war saxaafadeed ka soo saaray booqashadii uu taliyaha guud ee ciidankan uu maalmihii ina soo dhaafay ku maray qaybo kamid ah Kenya iyo Soomaaliya oo u kulammo kala duwan kula qaatay Madaxwayneyaasha Jubbaland iyo Puntland.
War-saxaafadeedkan ayuu talisku kaga war bixiyay nuxurka kulankii uu taliyaha, Jeneraal Stephen Townsend, maalinnimadii shalay la qaatay Madaxwayne Axmad Maxamad Islaam isaga oo uu kulanka ku weheliyay safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya amabasador Donald Yamamoto.
Ambasador Yamamoto ayuu war-saxaafadeedkan ka soo xiganayaa in uu Madaxwayne Axmad Maxamad Islaam ku bogaadiyey hawlgallada ay sida wadajirka ah u fulinayaan ciidanka daraawiishta Jubbaland, kumandooska Danab iyo ciidanka xoogga dalka kuwaas oo uu sheegay in ay tusaale wanaagsan u yihiin wada shaqaynta midho dhalka ah.
Yamamoto ayaa sidoo kale dhammaan madaxda Soomaaliyeed ee ah heer federal iyo heer Dowlad goboleed ugu baaqay in ay iska kaashadaan la dagaalanka cadawga Al Shabaab ah.
Stephen Townsen ayaa ka hor booqashadiisa Kismaayo iyo Bossaso, wuxuu soo maray saldhigga Maraykanku ku leeyahay gobolka Lamu ee Kenya. Taliyaha ayaa wasaaradda difaaca Kenya uga mahadceliyey dagaalka ay kula jiraan kooxda Al shabaab.